बक्स अफिसमा 'वार' को रेकर्ड कमाई, अहिलेसम्मका सबै किर्तिमान तोड्यो
२o७६ असोज १६ बिहीबार
मुम्बई । बलिवुडमा गान्धी जयन्तीको अवसरमा बुधबार रिलिज भएको अभिनेता ऋतिक रोशन र टाइगर सराफको फिल्म 'वार' ले बक्स अफिसका धेरै रेकर्ड तोडेको छ ।
फिल्म रिलिजको पहिलो दिन 'वार' ले बह्रती बक्स अफिसमा ५३ करोड ३५ लाखको कमाई गरेको छ । बलिवुड फिल्म विश्लेषक तरण आदर्शका अनुसार अशिलेसम्म कुनै पनि बलिवुड फिल्मले पहिलो दिन गरेको सर्वाधिक कमाई हो ।
भारतभर कुल ४ हजार स्क्रिनमा रिलिज गरिएको 'वार' ले यो संगै कैयौ रेकर्ड समेत बनाएको छ । फिल्मले राष्ट्रिय बिदामा सर्वाधिक कमाई गर्ने रेकर्ड बनाएको छ भने अभिनेता ऋतिक रोशन र टाइगर सराफको क्यारियरकै पहिलो दिन सर्वाधिक कमाई गर्ने फिल्म बनेको छ ।
साथै यस बर्ष रिलिज भएको सलमान खानको फिल्म भारतको पहिलो दिनको ४२ करोड ३० लाखको कमाईलाई समेत 'वार' ले जितेको छ । त्यस्तै यस बर्ष रिलिज भएको मिशन मंगलले २९ करोड १६ लाख, साहोले २४ करोड ४० लाख र कलंकले २१ करोड ६० लाख कमाई गरेका थिए ।
सिद्धार्थ आनन्दले निर्देशन गरेको यो फिल्म रिलिज अघि नै अत्याधि चर्चामा रहेको छ । 'वार' को बक्स अफिसमा एडभान्स बुकिंगले पनि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । फिल्मको रिभ्यु समेत रम्रो भएकाले फिल्म बक्स अफिसमा सुपर हिट हुने अनुमान गरिएको छ ।
उत्कृष्ट म्युजिक र ऋतिक र टाइगरको द्वन्द पर्दामा पहिलो पटक हेर्न दर्शक उत्साहित रहेकाले पनि फिल्मले बक्स अफिसमा शानदार कमाई गर्ने बताइएको छ । फिल्म विश्लेषकहरुले रिलिजको पहिलो दिन 'वार' ले ४० करोड भन्दा बढी कमाई गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
'वार' फिल्म हेर्ने पर्ने ५ कारण :
१. वार हेर्नु पर्ने पहिलो कारण अभिनेता ऋतिक रोशन र टाइगर सराफ पहिलो पटक पर्दामा आउनु रहेको छ । टाइगरले ऋतिकलाई आफ्नो बचपनको हिरोको रुपमा मान्दै आएकाले पनि यो फिल्म हेर्न दर्शकमा कौतिहलता रहेको छ । जबर्जस्त एक्शन रहेको यस फिल्ममा ऋतिक र टाइगरको लडाई रोमान्चक हुने अनुमान गरिएको छ ।
२. वार हेर्नुपर्ने अर्को कारण धुम-२ पछी ऋतिक रोशन निगेटिभ रोलमा अभिनय गर्दै छन् । आफ्नो एक्शन र नृत्यका कारण विश्वभर फ्यान बनाएका ऋतिक लामो समयपछी निगेटिभ भूमिकाआमा आएकाले वार हेर्नै पर्ने फिल्म बनेको छ ।
३. यो कुरा सबैलाई थाहा छ की टाइगर सराफले ऋतिक रोशनलाई आफ्नो गुरु मान्दछन । ऋतिक उनका बलिवुडका आइडल मान्ने टाइगर ऋतिकसँग काम गर्ने सपना देख्ने गर्दथे । उनको यो फिल्मबाट सपना पुरा भएको छ । ट्रेलर हेर्दा टाइगर र ऋतिकको द्वन्दले फिल्मलाई रोचक बनएको छ ।
४. 'वार' ले प्रशस्त मनोरंजन दिने र थ्रिलर कथामा बनेको ट्रेलर हेर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ । बलिवुडमा कमर्सियल फिल्मको बजार ठुलो भएकोले पनि वारले बक्स अफिसमा राम्रो गर्ने फिल्म विश्लेषकहरुले बताएका छन् । फिल्ममा रहेका स्टन्ट, रोमान्चक लोकेशनमा गरिएको शुटिंगले फिल्मलाई पुर्णरुपमा मनोरंजनात्मक बनाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
५. फिल्मको ट्रेलर हेर्दा ऋतिक र टाइगरमा द्वन्द देखाइएको छ भने दुईमा जित कसको हुन्छ भन्ने कौतुहलता पनि बनाइदिएको छ । अहिले ऋतिक र टाइगरका फ्यानहरुबीच दुईमा अन्त्यमा कसले जित्छ भन्ने कौतुहलता रहेको छ । जसले गर्दा पनि दर्शक हलसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । फिल्मको प्रचारका क्रममा पनि ऋतिक र टाइगर एकै पटक नगरी अलग अलग प्रचार गरेर आफुहरु बीच वर रहेको संदेश दिएर फिल्मलाई थप रहस्यमय बनाउन सफल भएका छन् ।
वारको बक्स अफिसमा किर्तिमान, तिन सय करोड क्लबमा पुग्यो कमाई
मुम्बई । बलिवुड फिल्म 'वार' सन् २०१९ को अहिलेसम्म सबै भन्दा धेरै कमाई गर्ने फिल्म बनेको छ । फिल्मले २०१९ मा ३ सय करोड कमाई गर्ने पहिलो फिल्म बनेको छ
कार्तिक-साराको ब्रेकअप !
मुम्बई । बलिवुडका अहिलेका चर्चित प्रेमी कार्तिक आर्यन र सारा अली खानको ब्रेकअपको खबर आएको छ । टाइम्स इंडियाका अनुसार आफ्नो व्यस्तताका कारण आफ्नो प्रेम जीवनलाई पूर्ण विराम लगाएका छन्
सलमान खानको नयाँ फिल्म 'राधे' को घोषणा, इदमा रिलिज हुने
मुम्बई । सलमान खानले आउदो बर्ष इदमा रिलिज गर्ने गरि नयाँ फिल्म राधेको घोषणा गरेका छन् । चर्चित निर्देशक संजयलिला भन्सालीसँगको फिल्म 'इन्शाअल्लाह' बन्द भएपछि सलमानले नयाँ फिल्मको घोषणा गरेका हुन्
अमिताभ बच्चन अस्पताल भर्ना
मुम्बई । बलिवुडका महानायक अमिताभ बच्चन अस्पताल भर्ना भएका छन् । भारतीय मिडियाहरुका अनुसार बच्चन लिभरको समस्यापछि अस्पताल भर्ना हुन् । अमिताभ बच्चनलाई गत मंगलबार राति २ बजे मुम्बईस्थित अस्पतालमा भर्ना